Genesisi 5 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kubva kuna Adhamu kusvika kuna Noa (1-32)
Adhamu akabereka vanakomana nevanasikana (4)
Inoki akafamba naMwari (21-24)
5 Iyi ndiyo nhoroondo yaAdhamu yakanyorwa. Pazuva rakasikwa Adhamu naMwari, akamusika akafanana naMwari.+ 2 Akavasika munhurume nemunhukadzi.+ Pazuva ravakasikwa,+ akavakomborera, akavatumidza kuti Munhu.* 3 Adhamu paakanga ava nemakore 130, akabereka mwanakomana akafanana naye, akamutumidza kuti Seti.+ 4 Pashure pekubereka Seti, Adhamu akazorarama makore 800. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 5 Saka pamwe chete, mazuva aAdhamu aakararama akasvika makore 930, achibva afa.+ 6 Seti akararama makore 105, achibva abereka Inoshi.+ 7 Abereka Inoshi, Seti akararama makore 807. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 8 Saka pamwe chete, mazuva aSeti akasvika makore 912, achibva afa. 9 Inoshi akararama makore 90, achibva abereka Kinani. 10 Abereka Kinani, Inoshi akararama makore 815. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 11 Saka pamwe chete, mazuva aInoshi akasvika makore 905, achibva afa. 12 Kinani akararama makore 70, achibva abereka Maharareri.+ 13 Abereka Maharareri, Kinani akararama makore 840. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 14 Saka pamwe chete, mazuva aKinani akasvika makore 910, achibva afa. 15 Maharareri akararama makore 65, achibva abereka Jaredhi.+ 16 Abereka Jaredhi, Maharareri akararama makore 830. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 17 Saka pamwe chete, mazuva aMaharareri akasvika makore 895, achibva afa. 18 Jaredhi akararama makore 162, achibva abereka Inoki.+ 19 Abereka Inoki, Jaredhi akararama makore 800. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 20 Saka pamwe chete, mazuva aJaredhi akasvika makore 962, achibva afa. 21 Inoki akararama makore 65, achibva abereka Metusera.+ 22 Abereka Metusera, Inoki akaramba achifamba naMwari wechokwadi kwemakore 300. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 23 Saka pamwe chete, mazuva aInoki akasvika makore 365. 24 Inoki akaramba achifamba naMwari+ wechokwadi. Uye haana kuzoonekwa, nekuti Mwari akamutora.+ 25 Metusera akararama makore 187, achibva abereka Rameki.+ 26 Abereka Rameki, Metusera akararama makore 782. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 27 Saka pamwe chete, mazuva aMetusera akasvika makore 969, achibva afa. 28 Rameki akararama makore 182, achibva abereka mwanakomana. 29 Akamutumidza kuti Noa,*+ achiti: “Uyu achatizorodza* pabasa redu nepakushanda zvakaoma kwatiri kuita nemaoko edu nemhaka yekuti ivhu rakatukwa+ naJehovha.” 30 Abereka Noa, Rameki akararama makore 595. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 31 Saka pamwe chete, mazuva aRameki akasvika makore 777, achibva afa. 32 Paakanga ava nemakore 500, Noa akabereka Shemu,+ Hamu,+ naJafeti.+
^ Kana kuti “Adhamu; Vanhu.”
^ Zvingava zvichireva kuti “Zororo; Nyaradzo.”
^ Kana kuti “achatinyaradza.”